လစ်ဗျား ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ အလှည့်လဲ | Freedom News Group
လစ်ဗျား ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ အလှည့်လဲ
by FNG on March 7, 2011	Is Syria next Libya? : FALLING DOWN THE DICTATOR Syrian president Bashar al-Assad and his wife Asma walk inastreet of Paris on December 10, 2010. Al-Assad is onatwo-days official visit to France. AFP PHOTO MIGUEL MEDINA (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images)
FNG လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ အား ပြည်သူများက အုံကြွတော်လှန် က လက်နက်စွဲကိုင် ၍
ဖြုတ်ချပြီးလျှင် အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်သည့် ဆီရီယား သည် ဒုတိယ လစ်ဗျား
(သို့ မဟုတ် )အီဂျစ် ဖြစ်နိုင်သည် ဟုသုံးသပ်ကြသည်။ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း တွင် လူထု အုံ
ကြွမှု များ ကြောင့် ဘာရိန်း၊ အိုမန် နှင့် ယီမင် တို့ တွင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေးများ လုပ်ဆောင်
ဆီရီးယား ခေါင်းဆောင် ဘာရှား အယ်(လ) အာဆတ် ၏ အစိုးရ အဖွဲ့ ကို ပြည်သူများ က ဆန့် 
ကျင် ဆန္ဒပြ ရန် စီစဉ် နေကြသည်။ ဘာရှား ၏ တူကိုယ်တိုင် ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
များ လုပ်ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ဘာရှား၏ ဇနီးမှာ လန်ဒန် တက္ကသိုလ်မှ စီပွားရေး သိပ္ပံ မဟာဘွဲ ကို ရွှေတံဆပ်ဆု (Gold
Medalist ) ရရှိသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အာဆတ် တို့ လင်မယား မှာ ဥရောပ တွင် လူ
ရာဝင်သည့် အာရပ် အာဏာရှင် လင်မယား ဖြစ်သည်။ အာဆတ်မှာ အနုစိတ် ဗေဒ (ဆေးပညာ)
ဖြင့် ဘွဲ့ ရရှိထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။
ဘာရှား နှင့် သူ၏ ဆီးရီယား ဘတ်ပါတီ မှာ တိုင်းပြည် ကို အာဏာရှင် တစ်ဦး သဖွယ်အုပ်ချုပ်သည်။
အတိုက် အခံ များ ကို ဖမ်းဆီးထောင် ချ နှိပ် စက်သည်။ အခုတော့ ပြည်သူလူထု ၏ ဒေါသ ကို ရင်ဆိုင်ရတော့ မည် ဖြစ်သည်။
လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ သည် တိုင်းပြည် ၏ နှစ်ဆယ် ရာ ခိုင် နှုန်း ကို သာ ထိန်းချုပ်နိုင်
Open Letter from Sofia to First Lady of Syria Asma al-Assad (web2.sys-con.com)
Just In Time For The Revolution, Vogue Does Profile Of Syria’s Sexy First Lady (businessinsider.com)
Assad Frightened Into Reform (andrewsullivan.theatlantic.com)
While Qaddafi Bombs His People, Syria’s Assad Conducts A Charm Offensive In Vogue (blogs.forbes.com)
“Syrians on Facebook try to organizearevolution” and related posts (yalibnan.com)
From: သတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ကဒါဖီ ထိန်းချုပ်ထား သည့် လေယာဉ်ပြေးလမ်း များ ကို နေတိုးက ဗုံးကြဲတော့မည်
ကဒါဖီ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာ ထွက်ခွာခွင့် အဆိုကို သဘောထားတင်းမာ သည့် လက်နက်စွဲကိုင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတို့ ပယ်ချ →
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,563,689 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishBullish Myanmar targets 100 gold medals at SEA GamesMyanmar releases 41 political prisonersSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyMyanmar's surreal capital now less ofaghost townMyanmar frees 44 political prisonersMyanmar releases 44 prisoners of conscienceICRC advising police in Myanmarmyanmar-sea-games-opening-ceremony-reuters-121213.JPGWant Burma info in your inbox each morning?